सारा अलीले स्कूल पढ्दा गरेकी थिइन पत्याउनै गार्हो हुने यस्तो हर्कत ! – Ramailo Sandesh
एजेन्सी : बलिउड स्टार आफ्नो फिल्म बाहेक निजी जिन्दगीसँग सम्बन्धित कुराबाट पनि चर्चामा आउँछन्। यस्तैमा थुप्रै स्टारहरु छन् जसले आफ्नो जिन्दगीको बारेमा अचम्म लाग्ने कुराहरु खुलासा गरेका छन्। बलिउड अभिनेत्री अमृता सिंह तथा अभिनेता सैफ अली खानकी छोरी सारा अली खानले पनि आफ्नो जिन्दगीको बारेमा निकै विशेष कुरा खुलासा गरेकी छन्। उनले आफ्नो स्कूलको यस्तो किस्सा बताईन्, जसले गर्दा उनलाई विद्यालयबाट निलम्बन गर्न लागिएको थियो।
अभिनेत्री सारा अली खानले जबदेखि बलिउडमा डेब्यू गरिन् त्यस समयदेखि उनी केही न केही कारण चर्चामा रहँदै आएकी छिन्। केही समय अघि उनले मुम्बई मिररसँग कुरा गरेकी थिइन्। यसै क्रममा साराले आफ्नो फिल्म बाहेक निजी जिन्दगीको बारेमा धेरै कुरा गरिन्। साराले आफ्नो स्कूलको दिनलाई याद गर्दै भनिन् कि उनले आफ्नो स्कुलमा यस्तो हर्कत गरेकी थिईन् जसकारण उनी निलम्बन हुने वालामा थिइन्।
सारा अली खानले भनिन्,”मलाई आफ्नो स्कुलको थुप्रै किस्सा याद छ। मैले मेरो क्लासको पंखामा ग्लू हालेकी थिए र पंखा चलेपछि त्यो ग्लु पुरै क्लासभरी फैलिएको थियो। यसै कारणले म लगभग स्कुलबाट निलम्बित भएकी थिए। किनकी मेरो प्रिन्सिपलले मलाई पटक-पटक सोधिरहेकी थिइन् कि ‘किन तिमीले यस्तो काम गरेको ? तर मसँग यस कुराको जवाफ भने थिएन।’
सारा अभिनेता सैफ अली खान र अमृता सिंहको छोरी हुन्। उनले स्कूल जीवनमा एक स्टारकिड भएको कुरामा पनि प्रतिक्रिया दिँदै भनिन, ‘मेरो बुबाआमा कलाकार हुन्, तर मलाई कहिले यस्तो लागेन कि म कुनै स्टार परिवारको घरमा जन्मिएको हो। मेरो बुबा सधैँ मलाई पढ्न लगाउनुहुन्थ्यो।’
यस बाहेक सारा अली खानले आफ्नो जिन्दगी र फिल्मको बारेमा धेरै कुरा गरिन्। सारा अली खानले फिल्म केदारनाथबाट बलिउडमा आफ्नो यात्राको सुरु गरेकी थिइन्। यस फिल्ममा उनीसँग स्वर्गीय सुशान्त सिंह राजपूत मुख्य भूमिकामा थिए। यस बाहेक सारा अभिनेता रणवीर सिंहसँग फिल्म सिम्बामा देखिएकी थिइन्। इम्तियाज अलीको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘लभ आजकल’ मा उनी कार्तिक आर्यनसँग देखिएकी थिईन।
यी हुन् डि’भोर्स फा’पेका नेपाली ४ नायिका